दु:खद खबर ! पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्क विहीन – List Khabar
Home / समाचार / दु:खद खबर ! पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज सम्पर्क विहीन
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 62 Views
पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ९ एन एईटी टि्वनअटर विमान सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ जना यात्रु लिएर विहान ९ बजेर ५५ मिनेटमा पोखराबाट उडेको जहाज सम्पर्कविहीन भएको हो ।
तारा एयरका एक अधिकारीका अनुसार अवतरण गर्ने समय भएपनि जहाज अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैन । जहाजबारे खोजविन सुरु भएको छ । साभार Onlinekhabar
याे पनि, भिटामिन डीको कमीले शारीरिक समस्या मात्र नभई मानसिक समस्या पनि निम्त्याउँछ, हड्डीसँगै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो भए शरीरमा भिटामिन डीको कमी छ भनेर कसरी चिन्ने जानौँ ।
यदि अत्यधिक थकान, कमजोरी र हड्डी दुख्ने समस्या जारी छ भने, तपाईंले आफ्नो भिटामिन डी परीक्षण गराउनुपर्छ। यी समस्याहरू सँगै अरू केहि समस्या देख्नुभयो भने अवश्य चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।
भिटामिन डी को कमी को प्रारम्भिक र गम्भीर लक्षण:- १) जोर्नी दुखाइ सँग हड्डी र ढाड दुखाइको वृद्धि । २) उदास महसुस ३) अचानक अत्यधिक कपाल झर्नु । ४) मांसपेशीहरूमा दुखाइ र स्नायुहरूमा तनावको अनुभूति । ५) घा`उ निको हुन ढिलाइ । ६) रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी र बारम्बार सङ्क्रमण । ७) निन्द्रा लाग्ने, सुस्त र सुस्त महसुस गर्नु । ८) सास फेर्न गाह्रो हुनु ।
भिटामिन डी को कमी हुनुका धेरै कारणहरू छन् । को- रोना संक्रमणपछि पनि मानिसमा यो भिटामिनको तीव्र कमी हुन थाल्यो । घामबाट टाढा बस्ने बानी पनि यसको कारण हुन सक्छ । साथै खानामा भिटामिन डी युक्त चीजहरू नलिनु पनि ठूलो कारण हो। सुन्तलाको जुसमा भिटामिन डी पाइन्छ । लगभग २५० मिली सुन्तलाको रस पिउनाले १००आईयू भिटामिन डी प्रदान गर्दछ। भिटामिन डी को कमी पूर्ति गर्न यो उत्तम फल हो। यस बाहेक घाममा बस्नु जरुरी छ ।
Previous ऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख
Next यिनै हुन् पाइलट जो अहिले बिमान सहित सम्पर्कबिहिन छन्